आँप खादा सतर्क रहौँ ! – NepalajaMedia
August 8, 2020 263
आपलाई कतिले डिजर्ट बनाएर खान्छन्, कतिले भातसँग त कतिले त्यसै पनि खान्छन् । सिजनको फल जसरी खाएपनि हुन्छ तर भनिन्छ नि धेरै खाएमा अमृत पनि बिष हुन्छ, चिनी पनि तीतो हुन्छ । ठिक यसैगरी आँप पनि धेरै खानु प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । मिठो र मौसमी फल भन्दैमा आँखा चिम्लेर जति पायो त्यती खानु हुँदैन ।
मौसम अनुकुल फलफूल सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ । हामी बजारमा देखिने बेमौसमी खानेकुरामा आकर्षित हुन्छौं, जो त्यती स्वस्थ्यवर्द्धक मानिदैन ।
यतिबेला बजारमा आँप आइसकेको छ । आँप खाने सिजन नै हो यो । आँप स्वादिलो त हुन्छ नै यसबाट शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्व पनि मिल्छ । जस्तो कि, भिटामिन ए, बिटामिन बि ।
आँपबाट के के हुन्छ त ? :
तौल बढ्न सक्छ:
ब्लड सुगर लेभल बढ्छ:
अक्सर हामी पाकेको वा पहेंलो र रहरलाग्दो आँप खरिद गर्छौ । तर, आँप पकाउनका लागि त्यसमा क्याल्शियम कार्बाइड मिलाइन्छ । यस केमिकलले स्वास्थ्यमा असर गर्छ । त्यसैले सकेसम्म बजारमा काँचो आँप किनेर घरमै पकाउन सकिन्छ । बजारबाट आँप खरिद गरेपछि त्यसको एकतिरको टुप्पोमा थोरै काटेर पानीमा डुबाउनु पर्छ ।
Prevबन्दाबन्दीको समयमा सिन्धुलीमा २ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न
Nextवडाध्यक्ष शाहीद्धारा बहिनी नाता पर्ने किशोरी कर’णी, साथीले रंगेहात देखेपछि खुल्यो पोल
व्यवशायबुधबार पनि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलामा कति पुग्यो?
अचम्मै तरिकले घट्यो सुनको मुल्य ,कति पुग्यो तोलाको ?